youtube/ Oromo demonstration video – OROMP4 Studio
Hiriira nagaa tibbaana magaloota Godinaalee Shawaa Kaabaa, Iluu Abbaa Booraa gaggeeffamen lubbu namoota akka darbe jirattoonni himaniiru.
Hiriirri mormii kun Godina Shawaa kabaa anaalee Kuyyuu, Yayyaa Gullallee, Hidhabuu Abootee, Godina Addaa Naannaawaa Finfinnee Magaalaa Caancootti gaggeeffame ture.
Akkasumas Godina I/A/ Booraa aanaalee Hurrumuu, Mattuu, Yaayyoo, Sal’ee Noonnoo, Haluu, Goree,Daariimuu,sibboo, Algee , Aallee Godina Buunnoo Beddellee Magaalaa Beddellee fi aanaa Cawwaaqaatti hiriirri fi mormiin cimaan akka ture ubatameera.
Hiriirri mormii kun karaa nagaan gaggeeffama kan ture ta’uus, loltoonni mootummaa federaalaa akkama kana dura hunda lammiilee nagaa dhadannoo gara gara qabatanii bahaniirratti dhukaasa banuun lubbuu namoota gaalafataniiru.
Hiriira Mormii Godina Shawaa kaabaa magaala Garba Gurraachaa fi Muka Xurrii akkasumas Goddina Addaa Oromiyaa Naannaawa Finfinnee magaalaa Caancootti gaggeffame sababeeffachun loltoonni federaalaa lammiilee nagaa ajjeessaniiru jedhameera.
Hiriirri mormii tibbaana magaloota Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffame kana tikoonni mootummaa waayyaannee qindeessuun qeerroo Oromiyaa aarsaa hin barbaachisne kaffalchiisuf yaadametti jedhameera.
Yeroo ammaa Qeerroon fi Pooliisiin Oromiyaa tokkummaa isaanii cimsuun shira jeequmsa uumuu danda’u hunda waan cuufaniif tikoonni mootummaa waayyaannee namoota hiriira mormiif kakasaa akka jiran beekameera.
Haaluma kana, Tikoonni mootummaa gaaffii Ummata Oroomoo Hidhamtoonni Siyaasa yaa hiikaman, Lammiilee Oromoo qe’eera buqqisuun yaa dhaabbatu fi mootummaan waayyaannee nu hin bulchu jedhuu fi kan biroo qopheessuun dargaggoota hiriira mormiif kakasa jiru.
Dargaggoonni shira kanan hiriira mormii erga bahanii booda tikoonni mootummaa waayyaannee konkolattoota irratti dhagaa darbachuu fi qabeenya namoota dhuunfa gubuun hiriira gara jeequmsaatti jijjiiruuf yaalaa turan jedhameera.
Tikoonni waayyaannee bobbaafte kun gocha jeequmsa irratti bobba’uun lubbuu dargaggoota Oromoo gaalafachu maddiitti, sabaa fi sablamoota Oromiyaa keessa jiran wajjiin walitti buusuuf guyyaa fi halkan hojjachaa akka jiran beekameera.
Kaayyoon tikoota mootummaa waayyaannee Oromiyaa keessatti itti fufinsaan jeequmsa uumuun lubbuu fi qaama namaa akkasumas qabeenya irratti miidhaan guddaa qaqqabsiisuu akka ta’e ragaaleen mul’isaa jiru.
Tikoonni waayyaannee dhalattoota naannoo Sabaa fi sablamoota biraa dhufanitti fayyadamun Oromiyaa keessatti jeequmsa uumaa akka jiran godina Shawaa kaabaa Aanaa Warraa Jaarsootti ragaa qabataman mirkana’eera.
Poolisoonni Oromiyaa nama maqaan isaa Fiqruu Boongaa Xoonaa jedhamu Godina Walaayittaa Sooddoo Aaanaa Kindoo koshaa Ganda Moonoo Waareezaa irraa qaxxaamuree aanaa Warra jaarsootti abiddi akka qabatu taasise to’aannoo jala oolchaniiru.
Tikoonni waayyaannee naannoo Oromiyaa dirree jeequmsaa fi booyichaa gochuu akkasumas ummata Oromoo Ummattoota Kibbaa wajjiin walitti buusuuf kaayyeeffatanii hojjachaa akka jiran ragaan mirkana’eera.
Hiriira babka adda addaati geggeefamaa jiru kana irrati jaarsoliin biyyaa qeerroodhaa wajjin bahudhaan gorsaan gargaaraa akka jiranus oddefannoo nu gaherraa baruun danda’ameera.
Hiriira Mormii Guddicha Guutummaa Oromiyaa Keessatti Hagayya 6 Bara 2016 Adeemsifameen Dhumaatii Lammiilee Oromoo Mudate ilaalchisee
Suraalee Qophii Dhugaa Bahumsaa fi Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo
Waa’ee dhiittaa mirga dhala-namaa Itiyoophiyaa keessaa – keessumaa, miidhaa uummata Oromoo irratti geggeessamaan.
Sirni bittaa alagaa dhiiga Ummata Oromoo lolaasuun bu’uureffame, mootummaa wayyaaneetiin waggootii 25f itti fufsiifamee har’allee haala gara-jabina suukanneessaan guutameen lubbuu ilmaan Oromoo dheebuu bilisummaaf hiriira nagaa bahanii dhibbaa ol galaafatee jira. Mootummaan wayyaanee hiriira mormii qaama sochii Warraaqsa Xumura Gabrummaa ta’e ilmaan Oromoo Hagayya 6 bara 2016 guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessan irratti tarkaanfii faashistummaa humnoota isaatiin raaw’ateen dhumaatii akkaan gaddisiisaa geessisee jira.
Addi Bilisummaa Oromoo lubbuu lammiilee Oromoo ka’imman dabalatee dabre kanaa fi dhiiga lammii dhibbootaan lakkaawamanii dhangala’e kanaaf gadda itti dhagahamu maatii kanneen lubbuun dabree fi ummata Oromoo hundaaf ibsata.
Fixiinsi jumlaa Kaabaa-Kibba, Bahaa-Dhiha akkasuma handhuura Oromiyaa/Finfinneetti guyyaa saafaadhaan ilmaan Oromoo gaaffii bilisummaa gaafatan irratti raawwatame, mootummaa wayyaanee tarree sirnoota faashistii lammiilee humnaan gabroomfatan jumlaan lafarraa duguuguun addunyaa duratti balaaleffatamanii ifaan galchee jira.
Hammeenyi dorgomaa hin qabne kun, Saba Oromoo laalaa fi hadhaa gabrummaa irraa yeroo kamiyyuu caalaa tokkoomee hawwii bilisummaa isaa dhugoomfachuuf qoma isaa rasaasa humnoota diinaaf kennee falmaa finiinsaa jiru kan dhaabu hin taane; tahuus hin malle.
Ummanni Oromoo qabsoo magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti dhiiga itti dhangalaasuu fi lubbuu itti wareeguudhaan bu’uura qabsiise kanatti Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatiin xumura guchuuf ammoo bifaa fi tooftaa barbaachisaa tahe maraan dhimma bahuun qabsicha finiinsuun mirga isaa ti.
Mootummaa daandii nagaa fi dimokraasiitti hin amannee fi maqaa dimokiraasii dawoo godhatee baruma-baraan lubbuu ilmaan biyyaa galaafataa Oromoo irratti gabrummaa sirneessuuf waraana isaa taankii fi madaafaan bobbaasee dhibboota ajjeesaa, kumoota madeessaa fi Kumoota kudhanootaan hidhaa jiru dhabamsiisuuf hireen ummata Oromoof hafte takkittiin, wareegama qabsoon gaafattu mara baasanii dura dhaabbachuun irree ummataan of irraa qaarisuu tahuu tahiinsi har’aa ifatti agarsiisee jira. Irreen Ummataa ammoo Taankii fi Xayyaara akka bilash godhu ykn. gatii dhabsiisu seenaan biyya Turkey-tti dhihoo kana dalagame ragaa dhihoo ho’aa dha.
Addi Bilisummaa Oromoo dhumaatii suukaneessaa fi balaa ulfaataa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo dheebuu bilisummaaf biyya abbaa isaanii irratti karaa nagaa hiriira bahan irraan gaheen gaddi gadi fagoon kan itti dhagahame tahuu irra deebiin ibsa. Kanuma waliin ajjeechaa humnoonni wayyaanee Kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti fi naannolee biyyattii adda addaattis dhaqqabsiisan ABOn ni balaaleffata.
Ummanni Oromoo cancala gabrummaa gita-bittoota Itoophiyaa of irraa kaasuuf qabsoo of irratti irkannoo gaggeesseen injifannoo mul’ataa fi abdachiisaa argataa dhufuu hundatu quba qaba. Ummatootni biyyattii hiree fakkaataa mudatanis yakka Oromoo irratti raawwatamaa jiru
mormuu fi qabsoo Ummanni Oromoo gaggeessaa jiru cinaa hiriiruudhaan yeroon mootummaa wayyaanee dhabamsiisuuf ejjennoo ifaadhaan sossohuun irraa eegamu ka maayii amma ta’uus yaadachiifna.
Mootummoonni fi jaarmayoonni addunyaa addattis Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii fi Gamtaan Afrikaa mootummaa wayyaanee dhumaatii suukaneessaa lammiilee irraan gahaa jiru balaaleffatuudhaan, ummataaf ittisa barbaachisu akka taasisan ABOn gadi jabeessee gaafata.
Ummanni Oromoo, miseensotni ABO fi sab-boontonni Oromoo, hundaan olitti ammoo fedhii fi hawwiin Oromoo humna kamiinuu ukkaamamuu akka hin dandeenye wareegamaan addunyaaf agarsiisuun qabsicha fuul-duratti furgaasaa kan jirtan dargaggoo-shamarran Oromoo (Qeerroo – Qarreen), tokkummaa Oromummaa, mallattoo fedhii fi hawwii Oromo kan taate alaabaa ABO fannifatuun, moyxannoo fi murannoo qabsoo dabalatee injifannoolee hanga har’aatti gatii lubbuu itti baasuun gonfatame tikfachaa, duula sirna faashistii obbolaa fi lammii isaanii galaafataa jiruun odoo hin rifannee fi mataa gadi hin qabanne gabrummaatti xumura gochuuf xiiqii fi murannoo irra caaluun sosso’uun filmaata isa maayii yeroon itti hin kennamne ta’uu yaadachiisna.
ABOn carraa kanatti dhimma bahuun akkuma kanaan dura gochaa bahee fi ittis jiru, qabsoon mirga abbaa biyyummaa fi fincilli gabrummaatti xumura gochuu akeekkatee gaggeeffamaa jiru shaffisaan galii isaa akka gahuuf waan barbaachisaa tahe hundaa kan raawwatu tahuu irra deebi’ee mirkaneessa.